5 Qori Ee Ugu Casrisan Marekanka. - iftineducation.com
iftineducation.com – Shaki kuma jiro inow yahay wadanka aad ugu hormaray uuna leeyahay teknologiyo casri ah aanan laheyn wadamada kale. Qeeb kamid ah waxey isticmaalaayaan sistem aadan ku fikirin waligaa. Website Silicon Alley Insider ayaa soo bandhigay teknolojiyo casri eh ay leedahay dowlada Mareykana. Waa kuwaanaa hadaba.
qorigaan shiishka loogu tala galay aad ujeedaan qofna dhaawici maayo. Qorigaan snaperka PHASR oo laga soo gaabiyay (The Personnel Halting and Simulation Response) waa sistem laser oo loo desain gareyay oo kaliya in target kadhigo ama kufuro shucaan si qofka waxba u arkin.
qoriga noocaan oo isticmaalo teknologi-gaan xataa Mareekanka mar ayuu u isticmaalaya dagaalkii Iraq si loogu adeegsado cadowgi koontorolka istaagi waayo.
Qorigaa waxoow heelyahay hirar elektromagnet toos u abaaraayo jirka qofka bani adamka, markaasoo qofka tabardhigaaya oona dareemaayaa xanuun.
Qofki oo ku dhaco waxow dareemaayaa sida asagoo ku gubtay qoraxda oo kale. Militariga Marekanka waxey ugu yeeraan qorigaan ‘Goodbye Weapon’.
Qorigaan waxow ka faaideystay magnetka dhulka, waxey leedahay xawaare aad u xoogan ila 7 jibaar xaaraha codka, qorigaan marka hore waxaa mala awaal fisik ah. Laakiin hadda Militeriga Mareykanka soo saaray sanadka 2008 mar latijaabiyay. Qorshaha laakin waxa weeyey in si rasmi ah loo soo saari doonto in la isticmaalo 2020-2025.
4. Cayayanka Hybrida MEMS
Qorigaan waxow ka casri sanyahay qoryaha baabuurta saaran ee laga hago remote control.
In laga badalay Maskaxda cayayaankan xajiinta ah laguna badalo chip komputer taasoo kontroli karto sistem syaraf kooda, cilmibaaraha waxuu ka kontoroli kara cayayankan meel walbo oo ubaahdo.
Asagoo ku daraayo kamera video iyo sameecad, xajiintaan waxey noqon karaan indha-indhayn casri ah.
Kani waa teknologi suuqa sifiican usoo galay. teknologi-gaan aad ujeedaan, waxaad ka dhageysan kartaa wada sheekeysiga dad wada joogo qol, adigoo kafog.
Sida loo isticmaalo: markey labo qof qol kuwada sheekeysanaayo, waxaa qabanaayo codkooda qalab isla qolka dhinac ka yaal sida daaqada akteeda, kadib laser-ka qoriga aanan isha bani aadamka qabankarin ama ariki karin ayaad daaqada xageeda soo aadineysa si uu uhelo hirarka laser-ka kadib qoriga ayaa kuu tarjumaayo si uu unoqdo cod fasiix ah side ku shekeysanayaan.